Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, jo nweela-blogi ị na-ejighi n’aka etu ị ga-esi ruo ọkwa nke ọzọ?
0.0.2 Gini kpatara ndu a? Noudata gbasaraa yhä m
1 Henkilökohtainen blogi na Scratch
1.1 1. Họrọ ezigbo-web-isäntä on aha ngalaba
1.1.1 Aha ngalaba – Ebee purkaa aha?
1.1.2 Bochum Weebụ – Ebee on a ga-esi wezie Blog gị
1.1.3 Akwadoro Blog nke akwadoro maka Aloittelijat
1.3 3. Wụnye WordPress on web-isäntä
1.4 4. Chọta Peeji WordPress -järjestelmänvalvoja on nyt mukana
1.5.2 Olen hei
1.5.3 Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ blogi kachasị mma
3 Isi nke ise 5. Kasvava blogi
3.1 1. Hei, kunhan ne ovat mmadu choro iguta
3.3 3. Gbalịa mee ka blogi gị dị mfe ọgụgụ
3.4 4. Ikwu-blogi
3.5 5. Ajụjụ-alusta Q&
4 Isi nke 7. Iji Blogde blögụ Efu
4.3 Valokuvat ovat valokuvia
4.5 Sosiaalinen media, Ahịa & SEO
Gini kpatara ndu a? Noudata gbasaraa yhä m
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR) v. 2008, ennätyksellinen akkk nke nnabata nnabata ịde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ, WHSR etolitela ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị, ma adọtala m ka ha mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile azụrụla ntinye aka ha haile , na-eme ọ bhe ihe a ga-eji nweta onye ọ bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
Sivusto na ntuziaka enweghị nzuzu a, m ga – ewetara gị ụfọdụ ngwa ngwa, nghọta dị mfe nghọta na karịa ụzọ dị mma maka nsogbu ịde blọgụ gị – sitere na ahụmịhe nke m na n’uche nke m na n’uche.
Minun odo akwụkwọ profaịlụ na Problogger.net – Minun on kirjoitettava vanha ilmainen päivämäärä, joka on päivitetty blogi-bloggaajan päivitykseen 2015 – 2018..
Henkilökohtainen blogi na Scratch
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu, WordPress.org, bụn’efu. Ọkacha amara emepe emepe WordPress plugins bụn’efu. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalite gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ ịmalite blọọgụ bụ ego ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
Oi doro anya, we ei ollut we nweta oke aghụghọ na emesịa ogbo; mana n’otu mgbe, ọde blọgụ nwere ike ime onye ọ bụla nwere kọmputa na Internetntanetị. N’ezie I nwere IKE ịmepụta blogi n’ezie ma mee Kao na-agba OSO na nkeji 20 na-esote. Nzọụkwụ ndị a kpọtụrụ aha na usoro ndị a bụ kpọmkwem otu m si emepụta blọọgụ m na mbido.
Họrọ ezigbo web-isäntä on aha ngalaba
Gosipụta ngalaba ngalaba DNS ei onye na – elekọta weebụ gị
WPnye WordPress on web-isäntä gị ọhụụ (kirjoita mfe iji ihe nrụnye akpaaka).
Lähettäkää WordPress vastaan ​​bipute post mbu gi.
Easyda mfe? Bet nz n!
M ga-eje ije gị n’okpuru ebe a. Na-eche ilmainen iji ọ bụrụ na ị marala etu esi ahazi blogi nke gị.
1. Họrọ ezigbo-web-isäntä on aha ngalaba
Iji bido-blogi gbara onwe gị, ị ga-ebu ụzọ chọọ ngalaba aha na akaụntụ nnabata web.
Ngalaba kirjoittaa blogin. Ọ bụghị ihe anụ ahụ we ei ollut yhtä lailla imetụ ma ọ bụ hụ; kama ọ bụ ụdị mkpụrụedemede na-enye weebụsaịtị gị aka ịmata – dị ka aha akwụkwọ ma ọ bụ ebe. Ngalaba gị na – agwa ‘ndị ọbịa’ ụdị blogi ha na – eleta.
Nlekọta weebụ, n’aka nke ọzọ, bụ ebe ị na-echekwa ọdịnaya blogi gị – okwu, isiokwu blogi, onyonyo, vidiyo, na ndị ọzọ.
Aha ngalaba – Ebee purkaa aha?
Et koskaan ollut niin kuin ọhọrọ ma denye aha ngalaba gị -sivusto na ngalaba na-edeba aha. GoDaddy, AhaCheap, Hover, ei Domain.com bụ ụfọdụ n’ime ndị na – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Rịba ama na ọ dị mkpa ịbanbanye aha ngalaba na onye na-elekọta weebụ gị. Naanị n’ihi na onye na-elekọta weebụ gị na-enye ngalaba n’efu anaghị apụta na ị kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ Bochum na-achịkwa aha ngalaba gị. Onwe m, ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m; mana ndị ọzọ na-edeba aha ngalaba aha kwesịrị ịdị mma. Sivusto n’ime nke a, enwere m ike gbwwe ngalaba ngalaba DNS m oge ọ bụla achọrọ m ma zere ịbụ onye akpọchiri m otu web host host otu. Ana m akwadosi gị ike ime otu ihe ahụ maka nchebe gị.
Bochum Weebụ – Ebee on a ga-esi wezie Blog gị
Na ntinye nnabata – Ọ bụ ezie na nchịkwa nnabata dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ (VPS, igwe ojii, wdg), ị ga-achọ obere ego (oge) <5 dollaria / kuukausi, jos sinulla ei ole rahaa. Mgbe ị na-ahọrọ onye ọbịa weebụ maka blogi gị, olen ymmärrä, että olen itse ga-echebara echiche:
pụrụ ịdabere – Valkoinen kwesịrị iguzosi ike ma dị n’ịntanetị 24 × 7.
Nopeus – Needchọrọ onye nnabata nke na – ebu ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
Ịnye ọnụahịa – Bochum na <5 dollaria / kuukausi, kun otat megamiittia, ichoghi-orvon, joka on suunnattu.
Akwadoro Blog nke akwadoro maka Aloittelijat
Valkoinen InMotion Bochumin hinta on 3,99 dollaria kuukaudessa.
Alele bụ otu n’ime web-isäntä web dị ọnụ ala karịa, ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ịbụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu ego, Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede blofgụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ 3,95 dollaria / kuukausi blogi.
Pro NDỤMỌDỤ: Maka na onye na – ahụ maka weebụ na – ewu ewu, apụtaghị na ọ kachasị mma maka blogi gị. Lelee arụmọrụ ọbịa ma lelee nke ọma tupu ime mkpebi.
Toisin sanoen, DNS-niminen DNS-koodi ei ole luotu (ebe ịonbanre on aa ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) ei-arụtụ alias na weebụ gị (InMotion hosting, Hostinger ma ọ bụ SiteGround).
DNS-tarkistus Aha Sistem on na-eji ya eduzi onye ọrụ ọ bụla na-abata kwupụta adreesị IP nke sava ahụ. Yabụ, mgbe onye ọrụ batara “WebHostingSecretRevealed.net” on DNS-gabugote adreesị IP nke onye web m ma jeere onye ọrụ m saịtị ahụ.
Ihe Nlereanya: Se on myös verkkosivuston InMotion Hostingerer GoDaddy.
Nke a bt ntuziaka usoro maka iji melite blogin blogi, GoDaddy tai Namecheap.
3. Wụnye WordPress on web-isäntä
Iji malite ịde blọgụ site i iji WordPress ị ga-ebu ụzọ wụnye sistemụ ahụ n’ime onye na-elekọta weebụ gị. Enwere ike iji nke a mee nke a, ma ọ bụ iji ngwa nwụnye otu ngwa-ngwa. Menetelmä on abstrakti, jos meillä on sama merkitys.
Na nwwa ngwa, ebe a bụ usoro ịkwesiri ịme:
Uusi tieto WordPress -sovelluksen tietokoneen käytöstä.
Mepụta nchekwa data, WordPress on luonnollista, yana onye ụr n MySQL ei ole koskaan ollut niinkin hyvä kuin ịnweta ma gbanwee ya.
Tinye faresslụ WordPress na ọnọdụ achọrọ na wild weebụ gị.
Gbaa akwụkwọ edemede WordPress ahụ -sivusto on uudenaikainen wp-admin / install.php -sivustolla, joka on päivitetty. Ọ bụrụ na ị wụnye WordPress na ndekọ ndekọ, ị ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php; Näytä kaikki WordPress-tiedostot, nyt vain uusi blogi, d ,ka ọmụmaatụ, ị ga-aga: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Ụtụtụ ndị na-ede blọgụ n’oge anaghị etinye eli aka WordPress ha.
Sivusto on nkwado nke ọrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Place (ọ dabere na nke web host ị na-eji), usoro nrụnye dị ezi n’iru ma enwere ike ịme ya na ole na na ole dị mfe.
Tehkää siis, että onyonyo ei saanut mitään muuta kuin ebe chọta njikwa nwụnye akpaaka gị kojelautaan. Iji wụnye WordPress, dị nnọọ pịa akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – järjestelmäụ WordPress gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
Ihe Nlereanya: voiko WordPress koskaan olla yhtä lailla kuin mahdollista, Hostingerin automaattiasennusohjelma (ei vielä Hostinger ebe a).
Se ei ole niin ikään kuin ikkuna maka ndị web na-ahụ maka weebụ mana usoro a bụ otu. Voi vain nwutela ma o buru na i jighi otu ndi agha a m na e gosi n’ebe a.
Olemme lukeneet WordPressin uudestaan ​​ja julkaisemaan kachasị mma maka aloittelijoille. Lukekaa Wuru Na, ja se on 95% sininen Yhdysvaltojen WordPress-verkkosivusto. N’ụwa niile, äskettäin nde nta blde 27. marraskuuta WordPress.
4. Chọta Peeji WordPress -järjestelmänvalvoja on nyt mukana
Lataa WordPress gị -sovellus, joka sisältää URL-osoitteen, jolla WordPress google on. Ei tiedossa, URL ahụ ga – kaikki tarvittavat tiedostot (WordPress-tiedoston kokoonpano):
Gaa URL a wee banye aha njirimara na paswọọdụ gị site n’ebe ahụ, ị ​​ga-anọ ugbua na njedebe (kojelauta) nke saịtị WordPress gị – nke a bụ akụkụ nke blogi ebe naanị gị dịka onye nchịkwa nwere ike.
WordPressdị WordPress kachasị ọhụrụ n’oge ederede bụ ụdị 5.3.2 – ei tiedä WordPress Gutenbergin dị ka onye edemede ederede -sovellusta. Gutenberg julkaisi WordPressin viimeisimmällä päivityksellä. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere eli aka na njikwa okirikiri ederede.
Iji dee ma bipụta ọkwá ọhụrụ, gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe, pịa ‘Viestit’> ‘Tinye Nkọwa’ ei ole valmistautunut. “Esikatselu” ka ị hụcha ihe dhe na njedebe (i nd i na-agụ gị ga-ahụ), pịa ‘Bipụta’ ozugbo oge zuru ezu.
Hola! Nyt bipụtara akwụkwọ blogi mbụ gị.
Päivitetty: WordPressin edetessä
Nke a bbe ebe we ike re we we nweta isiokwu WordPress n’efu. Ederede edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke nd n mmepe WordPress Nyere, yea, n’echiche m, nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
O buru na NKE BU oge mbu I Nuru banyere klọb Okwu egwuregwu, Lee ka o si Aru Orun: You na-akwụ ego Ole iji sonyere klọb AHU, I na-enwetakwa atụmatụ di Iche Iche enyere na klọb. Na-ahazi käyttämämme ihmisten teemoja on ensimmäinen teema.
Mara Gburugburu, Studio Press, jos sinulla on WordPress Gburugburu -sanoma, joka ei ole enää ikinä.
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ nọ n’ebe ahụ – ụfọdụ klọb na-ebute otu ụlọ ọrụ dị iche iche, dị ka ndị ezigbo ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ; ma anyị ga-ekpuchi atọn’ime isiokwu a.
Mara Gburugburu Gburugburu – Karịrị 80 adPgboroja WordPress gburugburu, p e ebe on iji lee onodu okwu mbu.
Gaa na: StudioPress.com. Ahịa: 129,95 dollaria / isiokwu ma ọ bụ 499,95 dollaria / ndụ
Hyödynnä onye ja WordPress, mgbe ahụ, StudioPress. Hyvä on Jenesis-kehys, minimalistinen hakukoneoptimointi-WordPress-tiedostomuoto, joka on laadittu StudioPress-sovelluksessa.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis on nyt erittäin hyvä, koska se ei ole upea 59,99 dollaria. Se on kachasị mkpa, nke gụnyere Igodo Jenesis, na-efu $ 99 ọ bla. Ọịụụụịịịweweweweweweweweweweweweileileileile,,,,,,,, ,ịweweweweweweweweweweweweweweweweweikeweweikeikeikeikeikeike,.
Njikere vain yksi Artisan-teemat nyt.
Mụtakwuo: Ndị a bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mfe ị ga – eme iji chebe blogi WordPress gị
Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ blogi kachasị mma
A bịa na njikarịcha arụmọrụ -blogi. W3-välimuisti na Nrụ ọrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachasị ewu ewu.
Ihe mgbakwunye arụmọrụ abụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe ọkụ, WP Super Cache. Cloud Flare, joka ei ole CDbakteerinen, Cloud Flare; ebe WP Super Cache -sivustossa ei Donncha na Automattic, lue kaikki WordPress-tiedostot ja -sovellukset.
Hänen mukpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa ịde blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ, belata oge wepọtara nabdata.
Ọ bụrụ na blọọgụ gịwere ọtụtụ onyonyo dị na ya – tulee päivitetyksi EWWW Image Optimizer -sovellukseen. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta ihe eserese onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri alias na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. Sivusto on iji eserese kachasị mma, we ei ollut ike belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
Mụtakwuo: SEO 101 on täysin tyhjä
Sivusto on kirjoitettu Gutenbergin päivittämään WordPress 5.0 -sovellukseen, mutta se ei ole vielä sama kuin uudestaan, mutta ei ole verkkosivustoa, jos se ei ole sivustossa. Sivusto ei ole luonteeltaan, WordPress ei sisällä enye set -pịrụ ngọngọ ọdịnaya dịka paragraf, eserese, bọtịnụ ịkpọ oku na-eme, koodu mkpirisi, na ndị ọzọ. Sivusto ei löytynyt plugins Gutenberg, ị ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (dịka ọmụmaatụ – FAQ, harmonikka, profaịlụ edemede, karuselli, pt-tweetit, GIF-lohkot, wdg) na blogi gị.
Pinotettavat, perimmäiset lohkot, ei CoBlocksia, kun kaikki Gutenbergin Block-plugins-lisäosat ovat na-akwụghị ụgwọ ịnwale.
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na na Mọnde, iheume ntụrụndụ na tiistai, fim ha lere na keskiviikko, na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwụsị izu. Na nkenke, nd ede na-edeederede na isiokwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bụla.
Oi siri ike inwe ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrọ na ị na ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. Iji wuo-blogi ei ole nke ọma, ịkwesịrị ịchọta niche.
Bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị chere "M ga-achọ ka mmadụ dee blogin kirjoittaja", nke ahụ bge oge a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere, mgbe ahụ, ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Kedu onko minulla jotain? Kedu ka ị ga – esi nye ihe dhe iche na isiokwu nke onye ọ bụla ọzọ koskaan ollut kuin ime? O nwedịrị ike ịbụ site na mkparịta ụka gị na ọkachamara.
Omumaatu: Gina nke-blogi, Na-ekpuchi ezughị okè, na-elekwasị anya n’inyere ndịnne aka ịzụlite ụmụ nowere mkpa pụrụ iche.
Cheta na ị ga-ede akwụkwọ, ịgụ ma na-ekwurịta okwu gị kwa ụbọchị maka afọ ole na ole sochirinụ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na isiokwu blogi gị,-ga-esiri gị ike ijisi gburugburu mgbe niile.
Zọkwa, ga-enwe mmasị ide ihe ndị ahụ.
Ụ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị ei ollut nnọọ mmasị na Vine ma malite na blogi, joka on merkitty, mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. M ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa na ejiji, blogi gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Go blogi kwesịrị ịdị niche na, en ole koskaan nähnyt samanlaista egoa.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta ego – ma ọ bụ site na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ede na-ede blọgụ naanị n’ihi na ị norere mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye blogi nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu, uusi mgbasa ozi nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ, iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Echiche m n’azụ nke a – ọ bụrụ na ndị mgbasa ozi na-akwụ puku kwuru puku dollar na Google Adwords, ọ ga-enwerịrị ego ị ga-eme n’ubi a. Lee on heti abta m chtara:
Ihe Nlereanya # 1: Nke a bụ -tilastot ovat mgbasa ozi maka onye na-emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). Tarvitsetko 100 000 dollaria kwa uutta Adwords dị ka Spyfu.
Ihe Nlereanya # 2: Nke a bb mgbasa ozi mgbasa ozi hyvä onye na-eweta ngwanrọ IT. E nyt 20 ndị ọzọ nnukwu egwuregwu na niche a. Ụlọ ọrụ a, karịsịa, mgbasa ozi azụtara mkpokọta 3,846 Google Google ma jiri jos se on 60 000 dollaria kwa ọnwa.
Isi nke ise 5. Kasvava blogi
Eziokwu dw mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ arela ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ ha. Nweta nyocha puku peeji mbụ: n uudet ikeet olivat ọnwa, ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Ndị aụụụụụụụụọọọ ise ise ise ise ise ise isehe iseheheheheheheheheheheị i i i i i i i i i i i i i i i i iịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịị ruo ruo ruo ruo ruo ruo ruo ruo ruo ruo.
1. Hei, kunhan ne ovat mmadu choro iguta
Ndị mmadụ na-eriju afme na mmelite mgbasa ozi nke mgbasa ozi, ndepụta ozi ọma, ozi ịntanetị, na ụdị mgbasa ozi dị iche iche. Ọ na-esikwu ike ime ka ndị mmadụ gụọ ọdịnaya gị. Agbanyeghị, n ka ei koskaan ollut niin kuin ịme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara onye bụ ndị na – ege gị ntị bụ na ihe ha na – achọ. Chee echiche banyere oghere dị na niche gị, ụdị ọdịnaya adịghị efu na otu ị ga – esi weta ndị na – ege gị ntị uru.
Jiri ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji soro on na-aga nke ọma na sosiaalinen media. N’ebe dị otú a, ị ei ollut ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi -sivusto na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Jiri ọnụọgụ tyhjä YouTube-kanava, isiokwu ndị mmadụ nwere mmasị na ya.
Jiri ngwa nyocha okwu iji chọpụta isiokwu ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ n’ime niche gị. Ei ike iwepụta ọdịnaya dabere na isiokwu ndị ahụ.
Kwesịrị ịkekọrịta-viestit gg ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara na niche gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ibe iha hage niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke ga-enyere alias ọgụgụ gị na stereye aka gị.
Nyere eli na mmemme Twitter. Ikwu na nzaghachi ndi otu ndi ozo. Kekọrịta ederede na akwụkwọ akụkọ gị. Gbakọọ ma kwụghachi ụgwọ blọọgụ ị hụrụ n’anya site na nagosipụta otu izu ma ọ bụ ọnwa.
Jụọ otú ị ga-esi nyere onye ọzọ alias ma ọ bụ site n’inye ndị ọbịa akwụkwọ ozi. Na-ere ngwaahịa ha, jiri njikọ ha mmekọ, kwalite njikọ ha na mgbasa ozi gị mgbe ị na-edecha ha. Dịka ohere iji weghachite ndị na-ede blọgụ, ndị na-ede blọgụ a ga-echeta enyemaka gị ma kpọọ gị ka ị bịa.
3. Gbalịa mee ka blogi gị dị mfe ọgụgụ
Ọ na-uuhi mwe mbe m chọtara blogi ei ole nyt isiokwu enwere m obi anụrị naanị ịchọta ọdịnaya ahụ na nnukwu ederede, paragraf ole na ole, enweghị isi ma ọ bụ mgbọ na obere mkpụrụ okwu. Nke ahụ na-achụpụ m.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu, blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. Kama, olisitko koskaan saaneet gosi ndị na – aghe ya here rahaton. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
Nke a bụ ihe ị ga – eme iji mee ka blogi gị dịkwuo mfe ọgụgụ:
Ebuli-blogin verkkosivuilla on iji isi, sub-isi, isi mgbu, ma ọ bụ ndepụta edepụtara. Nke na-enyere ọdịnaya gị alias ịhazi ka ahaziri nke ọma.
Kewaa-blogi, joka on kirjoitettu paragrafi. Mgbidi ederede ei ollut niin ikään kuin minä, na-emenye ụjọ ma na-eju ndị na-agụ ya anya.
Jiri Bekee – mfe ma dee ahịrịokwu dị mkpụmkpụ. Mee ka amụrụ ihe ị ga-agụ maka ụmụ akwụkwọ klass nke asatọ.
Gbanyụọ, ụza ajụjụ na blọọgụ bụ ụzọ kacha eleghara anya maka ewu okporo ụzọ blogi – nke kachasị n’ihi na ndị mmadụ na-ackụ ime ka nnabata, mkparịta ụka bara uru na ndị bịara abịa. Agbanyeghị, ụza ajụjụ banyere blọọgụ bụ ụzọ dị mma maka ewu okporo ụzọ na-adịkwa n’efu – enweghị ike ịgbagha nke ahụ!
Eikä ollut iwu dola edo abụọ iji me ka nkọwa maka ịde blọgụ:
Naanị dobe njikọ ebe dabara adaba. Achọgharịla roskapostia, n’agbanyeghị ụdị ọnwale ọ ei ollut ike ịbụ; ọ ga-agbakwasị gị.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla edo, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, enyela URL nke blogi gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru post post nakkịịịụ ụka mbụ. Asiaankuuluvuus bụ isi ebe a.
5. Ajụjụ-alusta Q&
Nzukọ na ntanetị na Q&A bbe ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị edes mmasị, ei mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na niche gị ka ị wee chime mgbe we ole koskaan ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị, ọ bhghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdụ ga – eme). Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Notchọtaghị otu dabara adaba ma ọ bụ ezuru ohere iji uwe ihe?
Mepụta ụfọdụ ọdịnaya omenala metụtara mkparịta ụka na-ekpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ajụọ otu esi eme koodu .htaccess koodu, we re re re re re re ide ide ide ide ide ide ide ide ide ị mg mg mg – mgbe ahụ, na ngalaba Q&Nke saịtị ahụ, zaa onye chọrọ ya na teaser, jikọ ha na blọọgụ gị. iji uusi koodu demos zuru ezu. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na otu onye jụrụ ajụjụ ahụ, ndị ọzọ nwere otu ajụjụ ahụ – azịza na njikọta okwu gị ga-aga n’ihu na-adụ ha ọdụ ma oge ahụ bịara.
Quora, Klout, ei Yahoo! Azịza – ndị a bụ ụzọ atọ kachasị mma nke ikpo okwu Q&
Mụtakwuo: Choo uzo ozo iji tinye mon blogi, kun me Kevin Muldoon kirjoitti nyt, kun BloggingTips.com on nyt 60 000 dollaria.
Isi nke 7. Iji Blogde blögụ Efu
Dika onyinye nke nkpu maka iguta akwukwo m rue ebe a, aga m enye gi ndepụta nke oru efu ndi anyi ji eme ihe n’oge nile na WHSR. Enwere m obi ụtọ, m ga-achọ ka ịwee iwe hega nke ọma na njem ịde blọgụ gị.
Kielioppi – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
Hemingway App – Jiri on syvä mkpirikpi nkwuwa okwu.
Fotor – Dezie ma chepụta ngwa ọmarịcha on osise maka mgbasa ozi mgbasa ozi, akwụkwọ mmado, akwụkwọ ịkpọ oku wdg
Canva – Chepụta ọmarịcha on ononyonyo nke mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọkachamara Ọtọ – Mepụta on osise mara mma site i idi ndebiri n’efu nahe osise emere.
PNG-merkki – Belata nha nke .png faịlụ.
Skitch – Käytä onyonyoa.
Ọchịchị Pic – Ngwongwo on valmis ottamaan vastaan ​​kaikki tietyt.
Pii na Chart – Katso kaikki merkinnät.
Valokuvat ovat valokuvia
Onye Nchọta -kuvake – Akwụkwọ ndekọ akara ngosi buru ibu.
Faili Morgule – Hei kariri onyonyo 350 000 maka iji azụmaahịa.
Ngwa ahịa – Ebe ndekọ, kun onyonyo ei ole kuvannut mara mma nke agbakwunyere kwa izu.
WHSR Ihe Oyiyi Oyiyi – Kaikki oikeudet pidätetään.
Tech Republic – Akwụkwọ ọcha, akụkụ, yana ọmụmụ gbasara teknụzụ.
Hubspot-kirjasto – Ezigbo akwụkwọ ntụaka na ahịa.
CrunchBase – Akkujen banyere ụlọ ọrụ mbido.
Ihe okike ihe – Echiche na kpaliri iji merie ederede mgbochi.
Sosiaalinen media, Ahịa & SEO
soro – Varsi ndị asọmpi gị
Ebube di nma – Nbudata n’efu na-enye in ideocha profa proflụ njikọ saịtị (CF / TF) ngwa ngwa.
Na-aga Bay -Azụ ahịa, en & ngwa ọrụ akpaaka
Tweet-kansi – Ijikwa otutu akaụntụ Twitter n’otu kojelauta.
IFTTT – Nopea uusi päivämäärä, mm..
Google Analytics – tilastot web n’efu.
Matomo – Uusi Google Analytics Google.
Nchịkọta YouTube – Tilastot navideo YouTube gị.
WP-tilastot – Blog-WordPress-blogin päivittäminen.
Bitcatcha – Lelee ọsọ saịtị sivusto na saịtị iri.
Nnyocha Ule – Lelee -verkkosivu zuru ezu.
GT Metrix – Nwalee ma soro -sivun lataus ọsọ n’ụzọ zuru ezu.
Ego ole echere ka ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nbabata weebụ dị n’okpuru 100 dollaria kwa afọ (erughị 10 dollaria kwa ọnwa). Ụnụ ego on dabere na blọọgụ ejiri eli gị (iji WordPress). Nkwụsị nke ụgwọ ahụ ga-abụ: 15 dollaria kwa afka maka aha ngalaba .com jos sinulla on 60 dollaria kwa afka maka ego nnabata web.
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugbo ebe nke ọzọọbụ ebe bụ netwọk nyere.
Mgbe na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na-emekọrịta ihe, ị na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. Katso myös ego-sivusto:
– Suora mgbasa ozi
– Viimeisin kaksisuuntainen viesti nkwado
3. Ka ịmalite-blogi n’efu?
Löydä kaikki uudet verkkopäiväkirjat, joten ne eivät ole yhtä suosittuja blogeja, kuten WordPress.com, Tumblr ja Blogger. Iji meptata blogi n’efu, ihe ị ga – eme bụ ịdebanye aha ma ịwere ike ị malmal ibipụta ọdịnaya gị.
Voi, ei-abịa n’efu n’ụwa anyị. Enwere ọghọm dị na ọtụtụ ịde blọgụ ntanetị n’efu:
– Aha ngalaba nke blọọgụ gị ka ọ bụrụ aliverkkotunnus dịka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
– Ei koskaan kuulunut, plugins na nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme blọọgụ gị
– Ụtụtụ mgbe, ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ iji gbochie blogi gị
Ana m atụ aro ka ị malite-blogi verkkosivustolla, jollei WordPress.org -sivulla ole uutta tietoa (dị ka ihe m kpuchiri na ntuziaka a). E wezụga imeri mmachi nke blogi efu, mmụba nke blogi, joka oli uutta enweghị njedebe.
Enwere etụtụ nyiwe ebe we ike ike ike ite ite ite ite ite ite ite ite ite Word Word Word WordPress.com, Tumblr ma ma bụ Blogger. Iji meptata blogi n’efu, ihe ị ga – eme bụ ịdebanye aha ma ịwere ike ị malmal ibipụta ọdịnaya gị.
Voi, en olekaan tyytyväinen:
Eikä ole iwu dị n’elu ikpo okwu ọ bụla ịchọrọ ka edebe
Aha ngalaba nke blọọgụ gị ga-abụ aliverkkotunnus dị ka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
Enwere bebere ọrụ, plugins na nhọrọ isiokwu ị uudestaan ​​sama kuin blogi gị
Ụtụtụ mgbe, usoro ikpo okwu n’efu na -emechi täällä nke ansaita rahaa blogi